> Resource > Free > TOP 5 Free MTS Converter
Files Video yimaado qaabab file kala duwan. MTS waa mid ka mid ah iyo qalabka qaar ka mid ah ayaa la horumariyey inuu u ciyaaro qaab file this. Hawsha ugu weyn waa in file il video kuma soo noqon karo qaab file MTS, sidaa darteed baahida loo qabo Converter video ah. Waxa aad weydiisan kartaa, "Xaggee ayaan ka heli karaa Converter faylka video free?" marnaba maskaxdaada, ka faa'iidaystaan ​​liiska converters free video file iyo diinta aad file in qaab file MTS.
Halkan waxaa ku qoran astaamaha.
Yaa ayaa sheegay in software free aadan heysan muuqaalada dhigooda bixiyo? Eeg markii ugu horraysay ee naga liiska, Wondershare Video Converter Free. Tani waa software diinta ah free video oo loo isticmaali karo si loogu badalo video files si MTS qaab video. Qaab MTS sokow, versions kale wax soo saarka yihiin TIVO, lowska, H.264, NSV, VOB, MKV, MTS / M2TS / TS / TP / TRP (AVCHD, H.264, VC-1, MPEG-2 HD), mod, TOD, DV, ASF, 3G2, MP4 DRM, dhexena, RMVB, WTV, OGV, MXF iyo VRO.
Efmeg waa software diinta kale free video oo loo isticmaali karo si loogu badalo ugu qaabab video inay qaab MTS. Iyada oo ay update dhawaan version 6, waxaa si buuxda u compactable la daaqadaha 8. Si kastaba ha ahaatee, wax soo saarka qaab ay kuma koobna mTK keliya, oo ah qaabab kale wax soo saarka yihiin M4V, MKV, MOV, MP4, Mpg, OGG, OGV, dhexena, Jabbuuti, TP, TS, WEBM, wmv iyo wax badan oo dheeraad ah oo dhan.
Isquint waa mid fudud oo ah in la isticmaalo software diinta video free in diinta MTS qaab file video. Iyada oo ay updates ugu dambeeyey, sifooyinka la jecel yahay ayaa lagu daray software this, waxaa kale oo la doorbiday in qoraalkii mushaarka badan.
Tani waa qalab diinta ka awood badan free video oo ka shaqaysa MAC iyo Windows version. Ma aha oo keliya aalad MTS video diinta ah, sidoo kale waa ciyaaryahan video ah oo encoder ah in si qaabab kala duwan encode kartaa filimada. Waxa kale oo loo isticmaali karaa sida software tafatirka video ah in jari karaa, jar oo ay ku biiraan filimada. By galaya URL ee video ah oo ka soo goobaha sida YouTube, MPEG Streamclip soo bixi kartaa video ah.
Free file Converter online (Converter Online)
Tani waa web ku salaysan Converter free video ah oo loo isticmaali karo si loogu badalo video files si qaabab sida MTS, 3G2, MKV, OGG iyo Koox ka mid ah qaabab kale file. Madal Tani waxay sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa diinta file maqal ah, Image diinta document diinta, diinta eBook. Waa Converter archive ah. In kasta oo xaqiiqda ah in ay tahay software ah oo lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan, waxay gaarsiisaa alaabta oo tayo leh waqtiga oo dhan.
Hadda, uma baahnid inaad si loogu bixiyo Converter file si loogu badalo qaab aad file MTS ah. Ka faa'iidayso oo ka mid ah software free maadaama ay yihiin kale oo weyn si ay dhigooda bixisay.